Ma Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalbaday in dalka lagu wareejo mise - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ma Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalbaday in dalka lagu wareejo mise
Waxaan shaki ku jirin in dalka inqilaab hoose uu ka dhacay 29-kii Disambar markaas oo Maraykanku si toosa u soo wacay madaxweyne Farmaajo una sheegay inay inqilaabi doonaan haddaanu talada u deynin Maxamed Xuseen Rooble.
Inqilaabkan rasmiga ah ayaa keenay in maanta uu dalbado ama loo dalbo in awooda dalka lagu wareejo. Waxa markiiba diidey madaxda kale ee fadhiya shirka kooxda Xalane ku qabanayso Muqdisho ee ka socda teendhada Xalane.
”Haddii aad ogolaan weydo shirka uu ku baaqay Maxamed Xuseen Rooble oo aad qaado talaabo kale waxaan ku qasban nahay inaan talaabo kaa qaadno ayaa naagta ku xigeenka arimaha Afrika u sheegtay madaxweynaha ayuu yiri Cali Calasow oo xogtan helay.
Waxaan shiki ku jirin in dalku hadda si toosa ugu gacan galay kooxda Xalane natiijada ay ka raadinaayaan doorashadan aya tahay sidii aanu ku soo noqon lahayn madaxweynaha talada haya.
”Dastuurka ay inoo xarxariiqqqn xataa waxay rabaan inay daaqada ka tuuraan. ayuu yiri Xuseen Warsame. Waxay xitaa amreen in daaqada laga tuuro kiiska xatooyada ee hadda ku socda Rooble.